Cosmopack 2019-news-HC Nkwakọ ngwaahịa Asia
Oge: 2021-04-13 Hits: 15
Dịka onye ndu na ụlọ ọrụ nkwakọ ngwaahịa, anyị nwere ibu ọrụ iji belata akara ụkwụ carbon anyị iji nyere aka lụso otu nsogbu ịma aka nke ọgbọ anyị ọgụ-mgbanwe ihu igwe. Ebumnuche ebumnuche anyị gụnyere mbenata Scope 1 zuru oke na 2 CO2e.
Otu nwere ahụmịhe n'ịrụpụta ihe iji duzie ọnọdụ dị na azụmaahịa nkwakọ ngwaahịa na ọtụtụ puku usoro imepụta omenala.
N'ime ọrụ anyị niile, na n'ogologo ọkọnọ anyị, anyị na-aga n'ihu na-enwe nnukwu ọganiihu n'ibelata akara ụkwụ gburugburu ebe obibi anyị. Usoro anyị na-ewuli na ọganihu ahụ, na-esetịpụ ụkpụrụ dị elu karị maka mbenata ikuku gas na-ekpo ọkụ, na-ebelata ihe mkpofu na iji mmiri eme ihe, na ịmịpụta ihe anyị n'ụzọ omume na ọrụ dị mkpa.
Nkwakọ ngwaahịa HC nwere mpako maka ọdịbendị nke ọrụ yana ntinye anyị iji hụ na vibrancy nke obodo ebe anyị na ndị ahịa anyị bi ma na-arụ ọrụ, yana ebe a na-emepụta ngwaahịa anyị. Anyị na-ejere ndị obodo ahụ ozi site na mmemme mmemme, onyinye ego na ngwaahịa, na afọ ofufo, iji nwee mmetụta dị mma na ọha mmadụ.
Na 2020, ndị ọrụ afọ ofufo HC Packaging nyere ihe karịrị 1,000 awa maka ihe ndị metụtara obodo, site na ịnye ndị okenye nri, nkwado ego nye ụmụ nwanyị ụlọ akwụkwọ abụọ na Hunan, China, ịkwakọ na inye akwụkwọ maka ụmụ akwụkwọ nọ na mkpa, na ọtụtụ ndị ọzọ.
N'adịghị ka ink na-acha akwụkwọ mmanụ, a na-eche na ink soy na-abụ ezigbo enyi na gburugburu ebe obibi, nwere ike ịnye agba ndị ziri ezi karị, ma mee ka ọ dịkwuo mfe ịmegharị akwụkwọ.
Nke mbụ: ProSweets Cologne 2019
Copyright 2021 - 2026 HC Packaging.
Nkwado Ngosiputa Ngwa
Tinye: O 9B, Lo Cn15, Duong So 4 Kcn Song Than 3 P Phu Tan, TP Thu Dau Mot Tinh Binh Duong, Vietnam